Nepalistudio » प्रधानमन्त्री ज्यू, रेलको डिब्बा चीनको कि भारतको ?
नेपालका सयौँ सीमास्तम्भहरु रातातात गायब पारिएका छन् । सुस्ता र कालापानीका समस्या समाधानबारे चुईक्क एक शब्द नबोलेर कुन दृष्टिकोणबाट नेपाल–भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको हो ? उचाई नाप्ने मेशिनको नाम के हो ?
प्रकाशित मिति :- २ बैशाख २०७५, आईतवार १३:४२